Ukuguquka kwesimo sezulu kwandisa ukudluliswa kwezifo | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Ngoba omunye wemiphumela emikhulu yokuguquka kwesimo sezulu ngu ukwanda kwamazinga okushisa aphakathi komhlabaLokhu kuvumela ukusatshalaliswa kwezinhlobo ezithathelwanayo ezindaweni eziningi emhlabeni jikelele.
Ngabe ufuna ukwazi ukuthi ukuguquka kwesimo sezulu kwenza izifo ezithathelwanayo zisabalale kanjani?
2 Izifo ezithathelwanayo ezisakazekayo
3 Ukusebenza kwezifo
Ukuguquka kwesimo sezulu kwandisa amazinga okushisa eplanethi yonke. Ngalesi sizathu, kunezindawo lapho amazinga okushisa abephansi phambilini futhi bekungekho zimo ezifanele zezinhlobo ezisabalalisa izifo, ezinjengomiyane base-Afrika, ukuhlala futhi, ngakho-ke, bekungekho bungozi. Kodwa-ke, ngokukhuphuka kwamazinga okushisa, kunezindawo lapho bavumela omiyane ukuba babe kuzo futhi bangasabalalisa izifo.
Izifo ezingahle zisabalale yilezo ezithinta izinhlelo zokuphefumula, ngenxa yezinguquko ezibangelwa amasosha omzimba.
Ukwanda kwezinga lokushisa lomhlaba kuya ngokuya kunquma ukusebenza kwezimo zomkhathi ezenza ushintsho emzimbeni womzimba futhi kwenze abantu abanezimo ezingalapheki zamaphaphu babe sengozini yokuthola izifo.
Labo abathinteka kakhulu bavame ukuhlupheka i-asthma, i-emphysema ye-pulmonary noma i-Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD).
Izifo ezithathelwanayo ezisakazekayo
Njengoba ukunqwabelana kwamagesi abamba ukushisa emkhathini kuyanda, amaphaphu asengozini yokulimala. Lokhu kudala ukusebenza kabusha okukhulu kwesitho ezifweni futhi kwandisa ukusabalala kwezinye zazo, njengaleso esibangelwe yigciwane lomkhuhlane.
Ngakho-ke, ukuguquka kwesimo sezulu kwenza labo bantu abangabaphethe kalula ukuba sengozini kakhulu.
Lapho izimvula ezinkulu, izivunguvungu, izinguquko ezingazelelwe kusimo sezulu noma ukushisa okweqile kwenzeka, ukudluliswa kwezifo ezithile okubangelwa amagciwane, amabhaktheriya kanye nezimuncagazi kuba lula. Yonke le miphumela itholakala ekushiseni komhlaba.
Akubona kuphela abantu abasengozini yokutheleleka kalula, kepha bonke labo abaphilile nabo bazothinteka, ngoba amasosha omzimba azohlaselwa yizimo ezibazungezile nezishintsha njalo.
Lapho lokhu kwenzeka nemvelo yethu iguquka, okunye ukwahlukahluka kuvela emikhubeni eyakha indlela yethu yokuphila. Ukuthola umbono, ezindaweni lapho kungabi khona imvula manje kunezimvula ezinkulu futhi amazinga okushisa ashubile. Lokhu kwenza abantu bachithe isikhathi esithe xaxa ekhaya noma endlini, ukuhlala nabantu abaningi, ukungadli kahle, noma ukucindezeleka.
Lezi zimo ezihlasela amasosha omzimba zithonya ukusebenza kwazo futhi zikwenze uphinde wenze izimo ezivame kakhulu lapho kukhona ukuxhumana nabantu abaphethe amagciwane. Ngenxa yalokhu, izifo zingasakazeka ngokushesha.
Ngokufingqa, ukushintsha izindlela zokuphila kwabantu kwenza kube lula ukuthi amagciwane asabalale.
Ngaphezu kwamagciwane athinta uhlelo lokuphefumula, "izifo ezithwalwa ngamaveta", okungukuthi, ezithwalwa yizinto eziphilayo ezinjengomiyane, amandla azo athathelanayo ashintshiwe. Amagciwane eDengue, eZika noma eChikungunya adluliswa omiyane futhi lezi, njengezinto eziphilayo, nazo ziguqula indawo yazo yokusebenza, ziphoqeleke ukuba zifuduke ngenxa yokuguquka komswakama nokushisa.
Ukuguquka kwesimo sezulu akugcini ngokuguqula indlela yokuphila yabantu, kepha futhi kuguqula nezitshalo nezilwane. Omiyane sebenyuse inani labo labantu kusukela lapho ngikwazile ukunweba ububanzi bazo. Ezindaweni lapho kwakungekho omiyane phambilini, manje sekugcwele zona futhi ziyizindlela ezinhle zokudluliswa kwezifo.
Ama-bacteria adluliswa kakhulu yilawo angabangeli ukulimala kwamaphaphu kodwa futhi athinta nangezinye izindlela njenge-leptospirosis. Lesi sifo sivela kulabo abaxhumana njalo nezilwane ezingcolile. Izinto ezithathelwanayo zitholakala emchameni wamagundane, izinja, namakati nasezitshalweni ezingcoliswe umchamo.
Njengoba ukwazi ukubona, ukuguquka kwesimo sezulu nakho kuthinta ukudluliswa kwezifo.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu kwandisa ukudluliswa kwezifo